⭐️Ifulethi Lesimanje Elisenkabeni Yedolobha Elidala Elinezitezi elinethezekile
Zihlole nganoma yisiphi isikhathi ngemva kuka-4pm! Asikho isidingo sokuhlangana vele uthole ukhiye wakho ebhokisini lokukhiya ngaphandle bese ungena endlini. Isheke lesixhumanisi lizothunyelwa kuwe nezithombe neziyalezo zendlela yokuthola ukhiye nendlela yokulithola ifulethi!
Kuyifulethi lesimanje elisha elinovulandi omaphakathi neDolobha Elidala eliqhele ngezinyathelo ezimbalwa ukusuka kuwo wonke amathilomu, amabha, amakilabhu nezindawo zokudlela. Iyindawo ethulile futhi iphephe kakhulu njengoba inesiteshi samaphoyisa ezansi. Izilwane ezifuywayo zivunyelwe!
Ifulethi lesitudiyo lingaba ngomumo webhizinisi, noma lilungele impilo yasebusuku yase-Bucharest njengoba libekwe khona kanye enkabeni yedolobha, eduze kwamakilabhu namabha adume kakhulu e-Old Town.
Ungakwazi ukufinyelela zonke izinto zikagesi ezisendlini (i-microwave, umshini wekhofi/wetiye, okomisa izinwele, njll.). Futhi uzothola ikhofi yamahhala yomshini wekhofi.
Kunezindawo zokudlela eziningi lapho ungathola khona ukudla, eduze kwebhilidi njenge-KFC noma i-Pizza Hut noma ezinye eziningi, nezindawo zokuthenga amabanga okuhamba njenge-Mega Image.
Awukho umgomo othi AKUKHO UKUBHEMA efulethini kodwa ungabhema kuvulandi.
Uzothola ikhofi ye-Nescafe Gusto yamahhala!
- Idolobha Elidala
- Isigodlo sePhalamende
Ngingakunikeza usizo ngesikhathi uhlala ezindaweni zokudlela ezibhukha, ukukutholela umshayeli, ukumisa imihlangano, ukubhukha, nanoma yini enye oyidingayo vele uze kimi futhi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukusiza ngezicelo zakho!